Robert Mugabe oo hadal layaab leh jeediyay xilli ay berri doorasho ka dhici doonto Zimbabwe | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Robert Mugabe oo hadal layaab leh jeediyay xilli ay berri doorasho ka...
Robert Mugabe oo hadal layaab leh jeediyay xilli ay berri doorasho ka dhici doonto Zimbabwe
29, JULY, 2018, Muqdisho (SNTV) Madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa qabtay shirjiraa’id oo uu kaga hadlayo Doorashooyinka guud ee lagu wado in maalinta berri ah ay u dareeraan dadweynaha dalka Zimbabwe.
Mr. Mugabe ayaa sheegay in uu taageeri lahayn Emmerson Mnangagwa oo ah ninka u sharaxan xisbiga Zanu-PF islamarkaana ay ku wadaan inuu noqdo qofkii bedeli lahaa oo noqon lahaa madaxweynaha dalka Zimbabwe.
Robert Mugabe ayaa si khasab ah looga qaaday xafiiska talada dalkaasi ayaa yiri ‘Anigu ma taageeri lahayn xisbiga aan dhisay oo si qasabka ah iigaga qaaday xafiiska’
“uma codeeyeen kuwa isoo weeraray oo i hareereeyay,” ayuu yiri. “aniga waxaan xulan lahaa oo dooran lahaa 22-ka kale ee musharixiinta ah.”
Hadalka Mugabe ayaa kusoo beegmay xilli maalinta berri ee isniinta loo balansan yahay in ay doorashooyinka guud ee ka qabsoomaan gudaha dalka Zimbabe, doorashadaasi oo ah tii ugu horreeysay oo laga qabto dalkaasi taniyo markii xilka laga tuuray madaxweynihii hore ee Zimbabwe Robert Mugabe.
Previous articleFalastiin Iyo Israaiil oo laga dhex wado dadaalo xabad joojin
Next articleR/Wasaare Kuxigeenka Xukuumadda Soomaaliya oo furay Kulan wadatashi ah oo looga hadlayo Doorashooyinka Qaranka Soomaaliya.